Maalinta: Meey 13, 2019
Akhari Trams waa nadiifin maalin kasta halkan
Tramways ay maamusho TransportationPark A.Ş., oo ah shirkad hoos timaada degmada Kocaeli ee Magaalo Weynta, ayaa si nadiif ah loo nadiifiyaa maalin kasta. Muddo yar gudahood, muwaadiniinta Kocaeli waxay jeclaan jireen taraafikada Akçaray in ay noqdaan kuwo deggan, nabad ah oo ugu muhiimsan. [More ...]
Urla Ferry Flights 18 Waxay Bilawday Maajo
Maamulka Izmir Metropolitan Dowlada IZDENIZ Agaasinka Guud, 18 May, adeegga maraakiibta Urla ayaa bilaabmaya. Karşıyaka, Konak, Guzelbahce iyadoo la raacayo wadadan waxay ku dhamaan doontaa juujiska 'Urla pier' waxaa la sameyn doonaa sabtida iyo axadaha. Tiknoolajiyaddii ugu dambeysay [More ...]
Imtixaanka Hore ee Wadada Wadada ee Jarmalka
Jarmalku wuxuu ka mid noqday waddammada dardar gelinaya dadaallada ay ugu jiraan “gaadiidka xamuulka xamuulka ee deegaanka u habboon”. Marka loo eego, tijaabada ugu horeysa ee ilk koronto ee wadada elektarooniga ah ee dalka waxaa lagu sameeyaa xadka 5 kiiloomitir ee wadada weyn ee u dhexeysa magaalooyinka Frankfurt iyo Darmstadt. Korontada iyo [More ...]
Qorlu Tacliinta Tababarka Carruurta ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee TCDD Digniinta Taariikhda
Xarunta Dib u eegista Amniga Gaadiidka bağlı iyo Guddiga Qiimeynta Hey ee baılı ee hoos taga Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha ayaa sameynaya shaqo aad u muhiim ah oo cod ka yeeli doona guuleystayaasha tareenka ee Çorlu. Ergada, shilalka noocan oo kale ah dib uma soo noqdaan [More ...]
Native in Turkey Recordkii Esi Technologies
Kalsoonida laga qabo nidaamka maareynta eSIM ee looga baahan yahay eCall, oo si toos ah ugu xira 112 xaaladaha deg-degga ah ee gawaarida jiilka cusub, ayaa dhammaatay. Milkiilayaasha baabuurta cusub ee maareynta durugsan ee gudaha iyo qaran eSIM [More ...]
Dhismaha xarig xawaare xawaare ku socda oo xawaare sare leh oo kuyaala magaalada Dubia ee xarunta isutaga imaaraadka carabta ayaa la sheegay in la qorsheeyay. Sida uu qoray wargeyska The National, xariiqda fiilada xawaaraha dheereeya ee ku taal magaalada Dubai ee xarunta Isutagga Imaaraatka (UAE) [More ...]
Alfa-X, oo baddali doonta tareennada caanka ah ee Shinkansen ee Japan, ayaa bilaabay tijaabooyinkiisii ​​ugu horreeyay. Tareenka wuxuu gaari karaa 400 km / saac maalintiina socdaalka 360 wuxuu ku safri doonaa km / h. Bariga JR, oo ka mid ah shirkadaha tareenka ee Jabaan, [More ...]
Istanbul Eskişehir Tareenka Xawaaraha Sare Heerka Tikidka iyo Socdaalka
Tikidhada xawaaraha sare ee xawaaraha sare ee Eskisehir ee magaalada Istanbul ayaa sheegaya inta TCDD ay daabacday liiska qiimaha ugu dambeeya. Mudo intee leeg ayay qaadanaysaa in laga helo tareenka xawaaraha sare ka taga Eskisehir ilaa Istanbul? [More ...]
URTIM waxay sii wadaa inay la timaaddo ardayda
Muhiimad weyn ayey u leedahay warshadaha iyo iskuullada inay la yimaadaan nashaadaadyo kala duwan, ardayda inay helaan khibrad iyo mustaqbalka waaxda. Intii lagu jiray sanad dugsiyeedka 2018-2019, Boğaziçi, Yıldız Teknik, MEF, İstanbul, Karadeniz Teknik, Süleyman [More ...]
RayHaber 13.05.2019 Warbixinta Shirka
Ma jiraan diiwaanada qarsoodiga ah ee 13.05.2019 ee nidaamkayaga.
Gaadiidka Dadweynaha ee Mersin
Duqa Magaalada Mersin ee Magaalo Weynta Vahap Seçer wuxuu soo gaarey war wanaagsan oo ku saabsan in Adeegyada Gaadiidka Dadweynaha ee Magaalada Mersin, oo lacag la’aan u ah ciidaha diinta, ay hadda xor u ahaan doonaan ciidaha qaranka. Daraasadaha horumarka ah ayaa laga sii wadaa [More ...]
Ku soo kabashada hooyooyinka ku saabsan tareenka Nostalgic
Dowlada Hoose ee Antalya waxay 3 kun oo ubax ah u dhiibtay rakaab dheddig ah oo ku dhacey taraafikada noodiska maalinta Hooyada. Gaadiidka Dawladda Hoose ee Antalya ee Gaadiidka Magaalada, Rakaabka Ragga ee Maalinta Hooyada ayaa soo dhoweeyay si lama filaan ah. Zerdalism - Taariikhda iyo dhaqanka [More ...]